December 2021 – हाम्रो देश
आफनै टाउकोमा आगो लगाएर हिँड्न तयार छौं : प्रचण्ड
Posted on 31/12/2021 by hamro des
१६ पुस, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीलाई क्रान्तिकारी बनाउने अवसर गुम्न नदिने बताएका छन् । कतिपयले प्रचण्ड फेरि झुपडीमा जान सक्ला ? चिल्लो गाडी छोड्न सक्ला भनेको भन्दै प्रचण्डले भने, ‘जरुरी पर्दा मलाई गाउँघरमा जान, उनीहरुसँगै बस्न, मजदुरसँग खान, जनतामाझ गएर बस्न कुनै गाह्रो छैन ।’ प्रज्ञा भवनमा जारी आठौं
राजावादी एक हुँदै, २७ पौषमा महत्वपूर्ण घोषणा गर्ने
काठमाडौं, १६ पौष । राजावादीहरु एक हुने दिशातर्फ बढेका छन् । विगतमा विभाजित र अन्यौलमा परेका राजावादीहरु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा नयाँ नेतृत्व स्थापित भएसँगै एक हुने दिशातर्फ बढेका हुन् । राप्रपा नै विगतमा तीन भागमा विभाजित थियो । कमल थापा, पशुपति शमशेर जबरा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी एक भए । राप्रपामा तीन अध्यक्ष रहेर भएको
काठमाडौं, १६ पौष । हिजो पूर्वयुवराज पारस शाहको जन्मदिन । उनी हिजो ५० वर्ष पुगे । यसपटक पारसको जन्मदिन पूर्व राजपरिवारले तामझामका साथ मनाए । होटल सोल्टीमा पूर्वराजपरिवारका सदस्य जन्मदिन मनाउन पुगेका थिए । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह, पूर्वरानी कोमल, पूर्वयुवराज्ञी हिमानी, पारसका सन्तान, बहिनीहरुका अलावा राजपरिवारका नातेदारको ठूलै जमघट भएको थियो । २ सय जनाका
काठमाडौं । ३० वर्षीया श्रीमती रबिना खातुनलले तीन हात, तीन खुट्टासहितको शिशुलाई जन्म दिएकी छिन् । खबर हो भारतको बिहारको । बिहारको गोपालगञ्जमा शुक्रबार रबिनाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रमा नर्मल डेलिभरीका बेला एउटा अचम्मको बच्चा जन्माएसँगै अस्पतालमा अनौठो बच्चालाई हेर्नका लागि भीड उर्लिएको छ । जन्मेको दुई घण्टापछि पनि बच्चालाई दुध खुवाउन नसकिएपछि शिशुको स्वास्थ्य बिग्रन
विबाहपछि यस्तो भव्य अपार्टमेन्टमा सरे कट्रिना र विक्की
एजेन्सी । अभिनेता विक्की कौशल र नायिका कट्रिना कैफको जोडी यतिबेला आर्शिवाद लिन र आफन्तको घरमा भेटघाटमा व्यस्त छन् । विवाहपछि यो जोडी जुहुमा आफ्नो नयाँ घरमा बिन्दाससँग बसिरहेको दृश्य पनि उनीहरुले सार्वजनिक गरेका छन् । जुहुको किनारमा अवस्थित यो राजमहल भवन भित्र दरबारभन्दा कम छैन । भारतीय मिडियाका अनुसार कट्रिना र विक्कीले जुहुको राजमहल
१६ पुस, काठमाडौं । अज्ञात समूहले हनुमानढोका क्षेत्रभित्र राखिएको मल्लकालीन शिलालेख तोडफोड गरेको छ । बिहीबार कृष्ण मन्दिर बाहिर राखिएको प्रताप मल्लकालीन शिलालेख तोडफोड भएको हनुमानढोका दरबार हेरचाह अड्डाका प्रमुख सन्दीप खनालले जानकारी दिए । उनका अनुसार सो अभिलेख राजा प्रताप मल्लको समय अर्थात् वि.सं. १७०५ मा राखिएको हो । अभिलेख तोडफोड भएको जानकारी पछि
आंशिक बदली भई पुनः वर्षा र हिमपातको सम्भावना
काठमाडौ- आज देशभर आंशिक बदली भई गण्डकी र प्रदेश नं १ का उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका एक वा दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना देखिएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार देशमा पश्चिमी न्यून चापीय प्रणाली र भारतको उत्तर प्रदेशको पूर्वी भूभाग र विहार आसपासमा रहेको न्यून चापीय प्रणालीको सामान्य असर रहेको छ
यो हो २८ करोड राजस्व छलीका आरोपितको घर, जो अहिले नख्खु कारागारमा छन्
परवानीपुर, बारा — पर्साको वीरगन्ज बजारबाट करिब ८ किलोमिटर उत्तरमा पर्ने बाराको परवानीपुर चोकबाट थप करिब पाँच किलोमिटर उत्तरपूर्व लागेपछि उमाशंकर रायभरको घर पुगिन्छ । १२ धुर ऐलानी जग्गामा बनेको खपडाले छाएको कच्ची घरको बीचोबीचबाट देखिन्छ खुला आकाश । प्रस्ट छ, यो घरले बर्खामा आकाशे पानी र हिउँदमा शीतलहरबाट ओत दिँदैन । पुस पहिलो साताको एक बिहान उमाशंकरको
भारतभित्र चीनको ठाडो हस्तक्षेप, भारतका १५ वटा ठाउँलाई आफ्नो भन्दै नाम नै फेरिदियो
काठमाडौं। भारतले आफ्नो देशको अरुणाचल प्रदेशभित्र पर्ने दावी गर्दै आएका १५ वटा ठाउँलाई चीनले आफ्नो भन्दै ती १५ ठाउँको नामसमेत परिवर्तन गरिदिएको छ । भारतले अरुणाचल प्रदेशभित्र पर्ने दावी गरेका यी ठाउँ चीनले आफ्नो देशको दक्षिणी तिब्बतमा जांगनानमा पर्ने बताएको छ । भारतको विदेश मन्त्रालयले चीनको यो कदमप्रति आपत्ति जनाएको छ । भारतले अरुणाचल प्रदेश
एजेन्सी, १६ पौष । यो संयुक्त राष्ट्रसंघले सार्वजनिक गरेको तस्बिर हो । तस्बिरमा शान्ति मिसनमा खटिएका तीनजना महिला सैनिकको तस्बिर छ । तस्बिर दक्षिणी सुडानको जुबास्थित यूएन शिविरको हो । जहाँ मलावीकी कप्तान अटुपेली मेवे, भारतकी मेजर बिन्देश्वरी र नेपालकी कप्तान रितु पाण्डे छिन् । तीनैजनाको पोशाक फरक छ । टोपीमात्र उस्तै । शान्ति सेनामा